Waad salaaman tihiin bulshada Bitcoin.
Ilaa x125x Seeraar Mustaqbalka Ganacsi Leverage
Sababtoo ah Binance wuxuu si rasmi ah ula shaqeeyay Bybit, iyaga oo awood u siinaya inay u qaybiyaan guddiyada 20%.
Bulshada Bitcoin waxay bixisaa 20% xiriiriye qiimo dhimis ah.
Xiriirinta Koodhka Gudbinta Binance (Nolosha 20% Xiriir-dhimista)
Isku xirka koodhka gudbinta ee loo yaqaan ‘Bybit gudbin’ (Nolosha 20% isku-xirka dhimista)
Mid . soo koobid2 . habka ganacsiga
2.1 . ganacsiga barta
2.1.1 . beddelo2.1.2 . aasaasiga ah, horumarsan2.1.3 . margin2.1.4 . Xawaaladda P2P2.1.5 . calaamadda saamiga
2.2 . Derivies
2.2.1 . Mustaqbalka USDs-M2.2.2 . Mustaqbalka COIN-M2.2.3 . Tokens Leveired2.2.4 . dagaal
3 . Hakinta Macaamil ganacsi4 . Xarunta dhexe waxay u guurtay Malta5 . Taabashada afduubka macaamiisha raacsan
Mid. soo koobid [wax ka beddel]
Binance waxaa maamula Zhang Fengqiao isweydaarsiga cryptocurrency Dhammaan.
Laga soo bilaabo Maarso 2021, waa sarrifka ugu weyn adduunka ee wadarta guud ee 335 cryptocurrencies ku qoran. Kaliya ka fikir in ay jiraan dhammaan noocyada loo yaqaan ‘cryptocurrency’.
Khidmadda macaamilku waa celcelis ahaan 0.1% macaamil kasta, oo sicir-dhimista ayaa waxyar hoos loo dhigay markii heerka xubinnimadu kororto.  
Khidmada bixintu way ka duwan tahay cryptocurrency kasta. Tusaale ahaan Seeraar 0,0005 ee ka bixitaanka, Ethereum Lacag-bixidda waxaa laga qaadaa 0.005. (waa is beddeli kartaa)
Laga soo bilaabo Sebtember 2019, sida is-weydaarsiyada kale ee adduunka, amaahda Binance waxay bixinaysay adeeg la mid ah warshadaha bangiyada. Si loo bixiyo amaahda sugnaanta ee loo yaqaan ‘cryptocurrency ama adeegga dhigaalka erayga’ cryptocurrency ‘. Si kastaba ha noqotee, maaddaama Binance dejinayo heerka dulsaarka badeecad kasta waqti ka waqti, heerka dulsaarka ee isla badeecadda ayaa laga yaabaa inay ku kala duwanaan karto waqti ka waqti, waxaana jira xaddiga lacagta loo yaqaan ‘cryptocurrency’ muddada codsiga rukunka iyo ka-qaybgalka adeegga, iyo muddada waa sida ugu gaaban sida 14 maalmood.
Sarrifka ayaa adeegsanaya lacag lagu magacaabo BUSD oo ah lacagteeda. Markaad dhigato doolarka, waxaa si otomaatig ah loogu beddelaa lacagta BUSD oo la dhigaa, lacagta BUSD-da waxaa lagala bixi karaa dollar ahaan saamiga 1: 1.
Waxaad ku siin kartaa macaashka macaamiisha adoo adeegsanaya xiriiriyeyaal tixraac ah (tixraacyo xiriirineed). Markay macmiil iska diiwaangeliso xiriirka gudbinta, khidmadda macaamil-ganacsiyeedka waa la dhimi karaa illaa 40% ama ka-talo-bixiyaha ayaa daryeeli kara. Tusaale ahaan, haddii sicirka dhimista khidmadda macaamiisha laga dhigo 40%, macmiilku wuxuu helayaa qiimo dhimis 40% ah oo ku saabsan khidmadda macaamil ganacsi, laakiin soo-jeediyahahu ma laha wax macaash ah.Waxaad sii wadi kartaa inaad kasbato 40% khidmadda macaamil ganacsi markasta oo aad sameyso macaamil ganacsi.
Akadamiyadda Binance , kaas oo ku shaqeeya adeegyadeeda caawimaadda, tayada macluumaadku aad ayey u sarreeysaa oo xaddiga macluumaadku aad buu u ballaaran yahay.
2. habka ganacsiga [wax ka beddel]
2.1. ganacsiga barta [wax ka beddel]
2.1.1. beddelo [wax ka beddel]
Waad ku beddeli kartaa hal qadaadi mid kale adigoo isticmaalaya shabakadda ganacsiga ee Binance.
Waa habka ugu fudud uguna dhaqsaha badan, laakiin khidmaddu waa yara sarreeysaa.
2.1.2. aasaasiga ah, horumarsan [wax ka beddel]
Tani waa hab caadi ah oo loogu ganacsado qadaadiicda goobta.
Isweydaarsiga aasaasiga ah iyo kan horumarsan waxyar wuu ka duwan yahay, laakiin habka macaamilku waa isku mid. Laba qadaadiic ayaa u jira lammaane suuqa dhexdiisa ah. Tusaale ahaan, labo ganacsi oo ah BTC / USDT waxay ka dhigan tahay inaad u beddeli karto BTC USDT ama USDT illaa BTC.
Tixraac, ma jirto fikrad ah ‘lacag’ lacagta nidaamka ganacsiga Binance. Hantida oo dhan waxaa loola dhaqmaa sida hal nooc oo lacagta birta ah oo badiyaa waa USDT isku mid qadaadiic xasiloon  tan lacagta muhiimka ah loo isticmaalo lacag ahaan dulsaar ahaan
2.1.3. margin [wax ka beddel]
Asal ahaan, waa macaamil ganacsi, laakiin waxaad ku iibsan kartaa ama ku iibin kartaa lacagta birta ah lacag ka badan intaad haysato. Haddii aad amar ku bixiso wax ka badan lacagaha aad hadda bixiso, waxaad ka amaahan doontaa shilimaad Binance si aad u dalbato amarkaaga. Lacagta laga soo amaahday Binance waxay ku koraan dulsaarka waqtiga.  Waxay la mid tahay ganacsiga laga iibsan karo ee saamiyada.
2.1.4. Xawaaladda P2P [wax ka beddel]
Tani waa muuqaal u oggolaanaya xubnaha Binance inay ka ganacsadaan qadaadiicda midba midka kale.
Markaan keligay eego, waxaan jeclaan lahaa inaan wax arko, laakiin shaqadan waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu beddelo lacagta fiatka (lagu guuleystay, dollar, yuan) iyo lacagta dalwaddii (inta badan USDT).
Si aad ugu xajiso lacagta fiatka ee ‘Binance’, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho qaab debaaji ah oo aad u adag oo ku xiran bangiga ama shirkadda kaararka deynta ee waddankaaga.  Si kastaba ha noqotee, adoo adeegsanaya ganacsiga P2P, waad iibsan kartaa Binance’s USDT adigoon marin waddo rasmi ah Qaabka ganacsiga ayaa ah Shayga Mania Waxay ku socotaa si la mid ah ganacsiga sheyga ganacsiga. Haddii aad dalbato macaamil macaamil ganacsi oo aad siiso qofka aad doonayso inaad marka hore la ganacsato, qofka lacagta sharci ku leh wuxuu marka hore lacag dhiganayaa koontada qofka kale. Kadib, ka dib markii xisbiga leh USDT uu xaqiijiyo dhigaalka lacagta fiatka oo uu u diro USDT dhinaca kale, macaamilku waa la dhammeeyaa.
2.1.5. calaamadda saamiga [wax ka beddel]
Xaqiiqdii waad ku ganacsan kartaa astaamaha saamiyada qiimo la mid ah saamiyada ku qoran. Maaddaama qiimaha calaamadaha saamigu ay raacaan qiimaha ganacsiga waqtiga-dhabta ah ee sarrifka saamiyada Mareykanka, ma jiro daaqad dalab ah (buug dalbasho) oo ku saabsan Binance, waxaadna dooran kartaa oo keliya inaad iibsato / iibiso.
Waxyaabaha gaarka ah ayaa ah in saamiyada lagu kala iibsan karo cutubyo ugu yaraan 0.01 saami ah halkii hal mar markiiba la wadaagi lahaa. Tani waa ku habboon tahay marka laga ganacsanayo kaydka qaaliga ah.
Sababtoo ah astaamaha saamiyada ma iibsadaan saamiyada dhabta ah Saamile xuquuqda codbixinta lama adeegsan karo.
2.2. Derivies [wax ka beddel]
2.2.1. Mustaqbalka USDs-M [wax ka beddel]
USDT sida margin mustaqbalka ganacsiga waa hawl qabata
Waad furi kartaa jago adiga oo dooranaya mid ka mid dheer / gaaban.
Meel dheer waa boos lagu kasbado marka lacagta u dhiganta ay kor u kacdo, booska gaabanna waa boos lagu kasbado faa’iido marka lacagta u dhiganta ay hoos u dhacdo.
Qiyaasta leverage booska waxaa loo dejin karaa 1x ilaa ugu badnaan 125x. Tusaale ahaan, haddii aad dejisaa booskaaga dheer ee 10x, waxaad helaysaa 10% haddii qadaadiicdu kor u kacdo 1%, laakiin waxay waayi doontaa 10% haddii ay shilinku hoos u dhacdo 1%.
Booska si qasab ah ayaa loo dareeray markii qaddarka khasaaruhu ka sarreeyo farqiga (saamiga luminta -100%). Tusaale ahaan, haddii aad maalgashi ku sameysid 50x leverage, xitaa haddii qiimaha uu hoos ugu dhaco kaliya 2% qiimaha soo gelida, saamiga macaashka / khasaaruhu wuxuu noqonayaa -100% isla markaana dareeraha ayaa isla markiiba dhici doona.
Way ku habboon tahay in la furo oo la xiro jagooyinka, oo ku dhufashada badan ayaa sarreeya oo ajuurada ayaa hooseeya.
Iyo tan iyo inta la dhigayo USDT, marka jagooyinka oo dhan la xidho, si otomaatig ah ayaa loogu keydiyaa USDT, taas oo ka dhigaysa mid fudud in la nasto ama dib loo bilaabo.
Laga soo bilaabo 2021, in ka badan kalabar kuwa sheegta inay maalgashi ku sameynayaan qadaadiic ‘Binance’ waxay sameynayaan mustaqbalkan USDs-M.
2.2.2. Mustaqbalka COIN-M [wax ka beddel]
Waa shaqo in laga ganacsado mustaqbalka iyadoo la adeegsanayo shilimaadka guud sida margin.
Si aad ugu ganacsato qaabkan, waa inaad haysataa qadaadiic u dhiganta. Si aad uga ganacsato mustaqbalka BTC waa inaad lahaataa BTC, iyo inaad ka ganacsato mustaqbalka ETH waa inaad lahaataa ETH. Waa wax aan macquul aheyn in laga ganacsado mustaqbalka ETH iyada oo la adeegsanayo BTC margin ahaan.
Waa qaab aan lahayn isticmaaleyaal badan sababta oo ah xaaladda in lacagta qadaadiicda waa in loo hayaa ganacsiga mustaqbalka.
Hase yeeshe, maaha iyada oo aan laga helin faa’iidooyinkeeda mustaqbalka USDs-M xaaladaha qaarkood.
2.2.3. Tokens Leveired [wax ka beddel]
ETFs Sidan oo kale, waa qadaadiic ka dhigtay mustaqbalka in meel ganacsi lagu kala iibsado.
Waxaa jira UP coin iyo DOWN coin Marka qiimaha qadaadiic dhibic kor u kacdo, qiimaha UP wuxuu kor u kacayaa isku dhufasho go’an, iyo marka qiimaha qadaadiicada dhibicdu hoos u dhacdo, qiimaha lacagta ‘DOWN’ ayaa kor u kacda a isku dhufasho
Si kastaba ha noqotee, si gaar ah, saamiga leverage ma ahan saamiga go’an, laakiin waa saamiga isbeddelka. Waxay isbedbedeshaa ugu yaraan 1.25 jeer ilaa ugu badnaan 4 jeer. Sida laga soo xigtay Binance, labanlaabku wuu hoos udhacayaa markii qiimaha astaamaha lagaarsaday kor u kacayo, labanlaabkuna wuu kordhayaa iyadoo qiimaha calaamadda leenaha uu hoos u dhaco. Tan waxaa la sheegay inay yareyneyso hoos u dhaca qiimaha astaamaha leveired ee loo yaqaan ‘soo-jiidashada isbeddelka’. #
2.2.4. dagaal [wax ka beddel]
Habka ku saleysan mustaqbalka BTC ee mustaqbalka COIN-M. Qiyaaso qadar cayiman oo BTC ah oo aad wajahdo xubnaha kale ee Binance 1: 1.
Kahor inta aysan ciyaartu bilaaban, waxaan kala dooranayaa mid dheer ama mid gaaban, oo marka ay ciyaartu bilaabmayso, 5 daqiiqo ayaa la siiyaa waanan guuleystaa haddii qiimaha qadaadiicdu u dhaqaaqdo jihada aan doortay.
Haddii qiimaha qadaadiicdu uu si weyn ugu dhaqaaqo hal dhinac 5 daqiiqo gudahood, EN Haddii aad guuleysato, ciyaarta isla markiiba way dhammaanaysaa, guuleystuhuna wuxuu helayaa qadaadiic badan. Khasaaraha ayaa lumiya inta shilimaad ee guuleystuhu helay.
Haddii qiimaha lacagta qadaadiic waxyar u dhaqaaqdo 5 daqiiqo, labada ciyaartoyba waxay helayaan ama luminayaan qadaadiic dhamaadka ciyaarta ka dib xaddiga dhaqdhaqaaqa.
Mid ka mid ah ciyaartoyda ayaa laga yaabaa inuu soo afjaro ciyaarta xilli hore. Xaaladdan oo kale, waxay la mid tahay waqtiga 5 daqiiqo ka dib, labada ciyaartoyba waxay helayaan qadaadiic inta qiimaha qadaadiicdu u socoto.Sida aad ka arki karto sharraxaadda, qaabka dagaalku waa qaab aad loo fududeeyay oo ka mid ah suuqa ganacsiga mustaqbalka ee dhabta ah.
Suuqa mustaqbalka waa asal ahaan wadarta eber Ciyaar ahaan, marka dhinac dhinac guuleysto, qof waa inuu lumiyaa intaas intaas.
Si kastaba ha noqotee, suuqa guud ee mustaqbalka hawd Si la mid ah, in yar oo go’aanno caqli badan leh waxay cunaan nacasyo aan tiro lahayn oo aqlabiyadda ah.
Si kastaba ha noqotee, qaabka dagaalku waa sida dagaal royale isla qaab dhismeedka 1: 1 dagaal Waxaa loo fududeeyay qaabka
Habka dagaalka, ganacsiga mustaqbalka waxaa had iyo jeer lagu sameeyaa qaab 1: 1 ah, oo haddii aad guuleysato ciyaar, waxaad helaysaa inta lacagta qadaadiicda ah ee qofka kaa soo horjeedaa lumiyay.
Jaleecada hore, waxay umuuqan kartaa mid ka fudud oo ka cadaalad badan suuqa mustaqbalka jira, laakiin runti waa isku mid. Xitaa halkan, waxaa jira wuxuush leh isku xigxiga guul laba-god ah.
3. Hakinta Macaamil ganacsi [wax ka beddel]
8dii Febraayo, 2018, ganacsigii waa la joojiyay. Dhinaca sarrifka jabsiga Waxaa loo sharaxay inay sabab u ahayd dayactirka goobta, maahan sababteeda. Binance ayaa beeniyay jabsiga maaddaama Ganacsi Ganacsi Beddel (Feb 8, 2018) Waxaa jiray dad badan oo tuhunsanaa jabsiga sababtoo ah waxay ahayd in horey loo sii ogeysiiyo haddii ay ahayd dayactirka goobta, laakiin isla markiiba si caadi ah ayaa loogu soo celiyay.
4. Xarunta dhexe waxay u guurtay Malta [wax ka beddel]
Binance dhamaadka Malta (Malta) ayaa wareejisay xarunteedii. Isweydaarsiga Binance wuxuu u guuraa Jasiiradda Blockchain Island ‘Malta’ 2018-03-26
OKEx Degree Malta Waxaan qorsheyneynaa inaan ka dhisno xafiis laan gudaha Isweydaarsiga OKEx wuxuu ku dhawaaqayaa qorshayaasha lagu aasaasayo Laanta Malta ee loo maro Wadada Binance (Abriil 13, 2018)
5. Taabashada afduubka macaamiisha raacsan [wax ka beddel]
Bishii Juun 2020, shabakadda shabakadda ku xiran Geesi iyo afduubka isticmaaleyaasha biraawsarka cinwaan gaar ah Raadinta Wixii aan qabanayey waa la kashifay. Xaqiiqdii, tixgelinta xaqiiqda ah in biraawsarku uu dhiirrigelinayo xannibaadda raadraaca sida faa’iido, waa tallaabo caqli-gal ah.
[Mid] Asal ahaan waxay xaruntiisu ahayd Hong Kong, waxay u guurtay Malta 2018. Kaalinta labaad waxaa ku jira Huobi Exchange Singapore, wadar ahaan 314 cryptocurrencies ayaa liis garaysan. Khidmadda xaddidan waa kaliya 0.05% marka aad u cusbooneysiiso heerka VIP6, laakiin xadka / qiimaha sicirka suuqa ayaa asal ahaan 0.05% loogu talagalay Upbit. Khidmadaha ganacsi ee mustaqbalka waa kuwo hooseeya 0.04%. Si kastaba ha noqotee, lacagta keydka ah ee ku jirta gudaha Binance dhab ahaan waa USDT. Tixraac ahaan, maadaama Binance kaliya u oggolaanayo hal xisaab qofkiiba, xaqiijinta laba-tallaabo suurtagal maahan haddii aad sameysatid koonto-hoosaad. Qadaadiic aan qiimaheedu isbeddelayn waqti ka dib. Dulsaarka waxaa la xisaabiyaa saacad kasta. Gaar ahaan, hadda ma jirto qaab loo xareeyo guusha si toos ah Binance ee Kuuriyada Koonfureed, maaddaama dhammaan bangiyada iyo shirkadaha kaararka deynta ay xayireen lacag bixinta Binance amar dowladeed. Arrinta xiisaha lihi waxay tahay, in Bitcoin Upcoin iyo Downcoin labadaba markii hore lagu qoro $ 10, laakiin bishii Maarso 2021, Upcoin waxay kor u kacday in ka badan $ 100 halka Downcoin ay hoos ugu dhacday wax ka yar 10 senti.
Shaqadani waa CC BY-NC-SA 2.0 GB La heli karo sida ku xusan (Marka laga reebo dukumiintiyada qaarkood iyo sawirada halka shatiga lagu cayimay)
Xuquuqda qoraalka maqaalka la qaybiyay waxaa iska leh qayb kasta, wax ku darsade walbana wuxuu leeyahay xuquuqda lahaanshaha qaybtiisa.
NamooWiki ma aha encyclopedia waxaana ku jiri kara hadalo aan la xaqiijin, eex, ama marin habaabin ah.
Namoo Wiki waa wiki. Adiga ayaa wax ka beddeli kara dukumiintiga, oo haddii aad rabto dadka kale inay wax ka sheegaan, waad furi kartaa doodaada.
Categories Uncategorized @so Post navigation